HomeTURKEYGobolka Marmara10 BalikesirBalikesir Kiziksa Bridge waa ok
Balikesir Kiziksa Bridge waa ok
07 / 01 / 2020 10 Balikesir, GUUD, hyperlinks, WADADA, Gobolka Marmara, TURKEY
Buundada Balikesir Kiziksa waa hagaag: Duqa Magaalada Balikesir Yucel Yilmaz ayaa dhawray balanqaadkiisii, Manyas County Manyas wuxuu sameeyay wadada Kocasay, Dhismaha Buundada Wadada Gönen-Kızıksa ayaa la dhameystiray.
Dawlada Hoose ee Magaalada Balıkesir waxay sii wadaysaa inay ka shaqeyso wadooyinka casriga ah iyo buundooyinka dhamaan gobolka iyada oo aan laga gaabin. Dawlada hoose ee magaalada Bal Metrokesir, oo ahmiyada siisa mashruucyada gaadiidka ee xarumaha magaalooyinka, waxay garowsatay mashaariicda fududeyn doonta gadiidka muwaadiniinta ku nool miyiga isla markaana bixin doonta adeegyo gaadiid iyo raaxo oo casri ah. Wadooyinka iyo buundooyinka ayaa ka socda howlaha dhismaha ee degmooyinka oo dhan, iyo sidoo kale dayactirka iyo hagaajinta wadooyinka iyo buundooyinka jira ee xadka degmada Caasimadda ee Manyas Kocasca County Manyas, dhismaha buundada Gönen-Kızıksa ee Göte-Kızıksa.
Sanadkii 1977, buundada 43-sano jirka, oo lagu dhisay taageerada dadka iyo taakuleynta dadka gobolka, waxaa burburiyey Dawlada Hoose ee Magaalada Bal Metrokesir markii ay dhammeystirtay nolosheeda waxtarka leh oo aan awoodin in ay ka jawaabto baahida. Buundada waxay ku taalaa wadada kale ee gaabinaysa waqtiga gaadiidka ee inta udhaxeysa Çanakkale-Balıkesir iyo sidoo kale marin u helida Manyas iyo xaafada Kızıksa; Waxaa dib loo dhisay iyada oo dhererkeedu yahay 240 mitir iyo ballac ah 11 mitir. Si loo bixiyo qulqulka xawaaraha iyo badbaadada leh ee gawaarida iyo lugeeyayaasha, 1,5 mitir ballaaran oo lugeynaya lugta ayaa lagu dabaqay labada dhinac ee buundada la balaariyey. Railing ayaa lagu rakibay dhinacyada buundada, oo leh muuqaal ka casri badan kuwii hore. Buundada, oo la dumiyey oo dib loo dhisay, iyo waddo dhererkeedu yahay 500 mitir oo laamiga ah ayaa laga sameeyey waddo 110 mitir ah oo ay ku jiraan soo galitaan iyo bixitaan.
Mashruuca markabka ee Balikesir-Bandirma iyo mashruuca korontada ayaa la dhigay
Gulf Crossing Bridge Bridge
Waddooyinka waa in la yareeyaa, nidaamka tareenka waa in la faafiyaa, dadka lugaynaya ayaa soo baxaya
Shaqada ka shaqeysa Baku-Tbilisi-Kars Railway Line ayaa sii socota
Tareenada xawaaraha sare ee Bursa Yenişehir ayaa si joogto ah u furan
Yozgat Sivas shaqooyinka tareenka xawaaraha sare ah ayaa sii soconaya si aan kala go 'lahayn
Shaqada Yozgat iyo xarumaha tareenka xawaaraha sare ee Sivas ayaa sii wadi doona si aan kala go 'lahayn
Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare wuxuu shaqeeyaa si aan kala go 'lahayn
Ogeysiiska Qandaraaska: Dhisidda Nidaamka Nidaamka Dejinta ee Wabashka ee Qaybta Waqooyiga
Khadka tareenka BTK wuxuu sii wadi doonaa shaqo aan kala go 'lahayn
Barafka, dagaalka ka dhanka ah barafka ayaa wali sii socota (Sawir Sawir)
Kaabayaasha mashruuca ee Akçaray ayaa si tartiib ah u shaqeeya
Sarkaalka Gaadiidka-Sen wuxuu sii wadaa shaqadeeda aan kala go 'lahayn ee ururka
Wadada Canakkale Balikesir
Buundada Gönen Kızıksa Yolu Stream Bridge